यसपटक पनि बुद्धिस्ट सर्किटको चर्चा, भारतको यस्तो रुचि – SaipalNews.com
काठमाडौ । विगतमा झैं यसपटकको बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणाले आवश्यक भन्दा बढी चर्चा पाएको छ । बुद्धिस्ट सर्किटको योजना कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनलाई उपयोग गर्ने धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेका छन् । त्यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसपटकको सम्मेलनले बुद्धिस्ट सर्किटलाई आकार दिने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्र श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार बौद्धमार्गी राष्ट्र हुन् । ती राष्ट्रका नागरिकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने देशको पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिन सक्छ । बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा यसपटक पनि सतही चर्चामा मात्र सीमित हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि ब्यक्त गरिएको छ ।
म्यानमारमा भएको तेस्रो बिमस्टेक सम्मेलनमा तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लुम्बिनी, बोधगया, कुशिनगर र चीनको तीर्थस्थललाई समेटेर बुद्धिस्ट सर्किट बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु गरेर चीन र भारतका तीर्थस्थल समेट्ने गरी बुद्धिस्ट सर्किट बनाएर पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको लविङ समेत गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा ग्रेटर लुम्बिनी कमिटी नै गठन भएको थियो ।
सोही वर्ष मंसिर १० मा प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभई बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने अवधारणालाई थप उर्जा प्रदान गरेका थिए । विशेषतः भारतले बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरसँग जोड्ने गरी करिब सात सय किलोमिटर क्षेत्र समेटेर बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ।
किन उत्रिए सिंहदरबारमा कर्मचारीको आन्दोलनमा ?
चीनकै भूभागमा भवन बनेको हो,नेपालले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ : चिनियाँ दूतावास
चीनको गरिबी नियन्त्रण अभियान : पाँच करोडभन्दा गरिबीबाट मुक्त
एमसीसीको विरोधमा भदौ २३ गते २२ दलीय संगठन प्रदर्शन गर्दै
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा साउन ३ गते संसद अधिवेशन आह्वान
एकीकृत समाजवादी दलले मन्त्री छान्दै
भीम रावलको बाटो हेर्दै सुदूरपश्चिमका एमाले, बलियो पकड बनाएका भीम रावल तटस्थ
सुनिल थापासहित १९ जनाले दिए राप्रपाबाट राजीनामा
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच किन भयो चर्काचर्की ? यस्तो रहेछ कारण
अब सहर कुरुप हुँदैन : प्रधानमन्त्री